SCIENCE TO SOCIETY: Einstein, Atom bomb and America
अमेरिकी राज्य न्यू मेक्सिकोको अलामोगोडोमा सन् १९४५ जुलाई १६ को विहान ५.३० बजे एटम बमको पहिलो परिक्षण गरियो । अमेरिकाले एटम वमको पहिलो प्रयोग सन् १९४५ को अगष्ट ६ मा जापानको हिरोशिमा शहरमा ग¥यो । पहिलो एटम वम विष्फोट गराइएको तीन दिनपछि जापानकै अर्को शहर नागाशाकिमा अमेरिकाले नै दोश्रो र अहिलेसम्मको अन्तिम एटम वम विष्फोट गरायो । एटम वम विष्फोटले लाखौं मानिसको ज्यान गयो, भौतिक संरचना ध्वस्त भयो अनि पर्यावरण कैयौं वर्षपछिसम्म असुरक्षित भयो । यसरी एटम वमको प्रयोग भएपछि दोश्रो विश्व युद्धको अन्त्य भयो । तर अमेरिकाले जापानी शहरहरुमाथि गरेको एटम वम आक्रमण युद्ध अन्त्य गर्नुमा मात्र सिमित थिएन । किनभने त्यस समयमा जर्मन र इटाली युद्धबाट हारेका अनि पछि हटिसकेकाथिए । प्रत्यक्ष युद्धमा जापान मात्र थियो तर उ पनि सम्मानजनक रुपमा युद्ध अन्त्य गर्ने तयारीमा थियो । अमेरिकी वम आक्रमण भन्दा अगाडी नै जापानले तत्कालिन सोभयित संघ समक्ष युद्ध अन्त्यको प्रस्ताव राखिसकेको थियो । त्यसकारण जापानलाई हराउन वा युद्ध अन्त्य गर्न मानव संहारकार िएटम बमको प्रयोग जरुरी थिएन ।
मानव संहारमा एटम वमको प्रयोग भएपछि आइन्सटाइन एकदमै दुःखी भएका थिए । खासगरि अमेरिकालाई एटम बम बनाउन पत्र पठाउने र उक्साउने वैज्ञानिकहरुले पनि उक्त वम मानवमाथि प्रयोग होला भन्नेसम्म सोचेकाथिएनन् । जर्मनीले पहिले एटम वम बनाउला भन्ने डरले अमेरिकी कदमलाई समर्थन गर्नेहरु पनि जब जर्मनीले एटम वम बनाउने सामथ्र्य राख्दैन र बनाउने कुनै योजना छैन भन्ने सार्वजनिक भयो, त्यसपछि कतिपयले उक्त कार्यबाट पछि हटे र वम निर्माण कार्य बन्द गर्नु पर्ने माग गरे । तर वम बनि छाड्यो र प्रयोग पनि भइ छाड्यो । यसबाट आइन्सटाइनले ठूलो पछुतो माने । आफूले पठाएको पत्रका लागी आफैलाई धिक्कारे ।
अमेरिका एटम वम बनाउने, परिक्षण गर्ने र प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र हो । उसले सबैभन्दा बढी परिक्षण र भण्डारण गरेको छ । उसँग अहिले पनि १२,०७० शक्तिशाली आणविक वम रहेका छन् । यसरी शुरु भएको आणविक वम निर्माण र भण्डारण विश्वमा फैलिएको छ । अमेरिकाले एटम वमले आक्रमण गर्ला भनी उसलाई धम्काउन रुसले एटम वम बनायो । चीन, वेलायत, फ्रान्स पनि यस प्रतिस्पर्धामा सामेल भए । भारतले एटम वम बनाएपछि पाकिस्तानले पनि बनायो – आफ्नो सुरक्षाको लागि भनेर । अमेरिकाले आक्रमण गर्ला भन्ने डरले उत्तर कोरिया, इरान आदि देशहरुले पनि एटम वम बनाएको आशंका गरिएको छ । यसरी शुरु भएको आणविक वमको होडबाजी अन्त्य गर्न अमेरिकाकै महत्पूर्ण हात रहेको छ ।
– बसन्त गिरी
(रसायनशास्त्र केन्द्रिय विभाग, त्रि.वि. मा अनुसन्धानरत)
Dhruba Panthi August 11, 2010 at 7:20 PM
सान्दर्भिक र उपयोगी लेख अन्लाइन पाठकहरुसमक्ष पनि बाँड्नुभएकोमा धन्यवाद !
Pradeep Kumar Singh August 14, 2010 at 1:41 AM
Liked the article and overall blog. Keep it up!